လက်ထပ်ထိမ်းမြား မင်္ဂလာ ဆောင်နှင်းခြင်း လျော့ကျမှုသည် လူပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအ၀ိုင်းအတွက်ကြီးမားသည့် ပြဿနာတစ်ခုပင်တည်း အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန
လက်ထပ်ထိမ်းမြား မင်္ဂလာ ဆောင်နှင်းခြင်း လျော့ကျမှုသည် လူပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအ၀ိုင်းအတွက်ကြီးမားသည့် ပြဿနာတစ်ခုပင်တည်း
အောကျတိုဘာ ၈, ၂၀၁၇ - ၃:၄၉ ညနေ News Code : 859001 Source : ABNA Link:
လက်ထပ်ထိမ်းမြား မင်္ဂလာ ဆောင်နှင်းခြင်း လျော့ကျမှုသည် လူပတ် ၀န်းကျင်အသိုင်း အ၀ိုင်းအတွက်ကြီးမားသည့် ပြဿနာတစ်ခုပင်တည်းဆို သည့် ကိစ္စရပ်ကို ဟဇရတ် အာယာ သွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ မကာရေမ်မိုရှိရာဇီး ရေးသား သီးကုံး ထား သည့် ( မွရ်ှကေလာသ်သေ ဂျင်စီ ဝါ ဂျဝါနန် )) စာအုပ်မှ အဗ်နာ ချစ်ပရိတ်သတ် များ အတွက် ကောက်နုတ် တင်ပြအပ်ပါတယ်။
လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု လျော့နည်းခြင်း၊ လူငယ်၊ လူရွယ်များအနေဖြင့် အိမ်ထောင်သည်ဘ၀အဖြစ် ဘ၀တည်ဆောက်ဖို့ မနှစ်သက်ခြင်း၊ အိမ်ထောင် ပြုခြင်းထက် သဘာဝကိုဆန့်ကျင်ပြီး လူပျိုဘ၀အဖြစ် ဘ၀တည်ဆောက်ခြင်း ကိုအလေးပေးခြင်းများကို ဘ၀ဟု လုံးဝအမည်တပ်ရန် မသင့်လျော်ပေ။ ဤအရာများသည်ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးအတွက် ပြဿနာကြီး၊ အရှုပ်ထုပ်ကြီး တစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် ဤပြဿနာ၊ အရှုပ်ထုပ်နှင့် အတူ အခြားအနုတ် လက္ခဏာပြ အကျိုးဆုတ်ယုတ်မှုများသည် လျှင်မြန်သည့် ဘ၀ခရီးနှင့်တကွ၊ ယခု ကျွန်ုပ်တို့ ခေတ်လူသားများကို ၀ိုင်းရံပိတ်ဆို့ ထားလေသည်။
လက်ထပ်မှုနည်းသွားခြင်း၊ လျော့ကျခြင်းသည် လူသားမျိုးနွယ်ကို ဖြစ်ထွန်းမှု နည်းပါးစေမှု၊မျိုးဆက်သစ်နည်းပါး မှုဆို သည့်ပြဿနာ ကို သာ ဖြစ် စေ သည် မဟုတ်ပေ။
လက်ရှိ အခြေအနေတွင် ကမ္ဘာလောကကြီး၌ လူဦးရေများပြားမှု ပြဿနာနှင့်ရင်ဆိုင်နေရလေသည်။ မကြာမီအနာဂတ်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း လူဦးရေ နည်းပါးမှုနှင့် ရင်ဆိုင်ရပေမည်။ (အကြောင်းမှာ လူဦးရေများလာမှုကို စက်မှုထွန်းကားသည့် နိုင်ငံများ၌ လုံးဝထိန်းချုပ်မှုပြုလာသည့်အတွက်ကြောင့် ပင်တည်း။) ဤအတွက်ကြောင့် ရှာဒီလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုလျော့ကျခြင်းသည် ဒုက္ခသောက အကြောင်းတရားကိုဖြစ်စေလေသည်။
ပို၍ဆိုးရွားလှသည့် အားနည်းမှု၊ ချွတ်ယွင်းမှုမှာ ဤလက်ထပ်မှုနည်း လာခြင်းထက် လူပျိုများသည် လူမှုရေးအသိုင်းအ၀ိုင်းများဆိုင်ရာ တာဝန်များ ကိုထမ်းဆောင်ရာ၌ နောက်ကျ ကျန်နေခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းတို့သည် ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာအားလုံးအရာ၌ ယေဘုယျ အားဖြင့် ပြတ်တောက်သွားချေပြီ။
တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်ဘ၀သို့ ရောက်သွားပြီး၊ အထိန်း အကွပ် မရှိသည့် လေဟာပြင်တွင် အလေးချိန်မရှိဘဲ လွင့်မျောနေ သည့်အရာ တစ်ခုပမာ မျောလွင့်နေချေ သည်။
ဤကဲ့သို့သော်ပုဂ္ဂိုလ်များသည် အသေးမွှားဆုံး အရာတစ်ခုဖြစ်သည့် မြေနှင့်ရေကိုပင် အဆက်အသွယ် ဖြတ်တောက်နိုင်ပေသည်။ ပြီးနောက် ချက်ချင်း အခြားနေရာတစ်ဖက်သို့ လေလွင့်သွားလေသည်။ (စိတ်လွင့် မတည် မငြိမ် ဖြစ်နေကြောင်းကို ဆိုလိုပါသည်။) (သို့မဟုတ်) ဒေါသ အမျက် ထွက်လျက် (မိမိ) ဘ၀ကို အဆုံးသတ်စေလေသည်။ ဘ၀ကိုမျက်ကွယ် ပြုလေသည်။
မိမိကိုယ် သတ်သေသူများ၏ အရေအတွက် အများအပြားသည် ဤဖြစ်ရပ်မှန်ကို ကောင်းမွန်စွာ ဖော်ပြနေပေသည်။ (အကြောင်းမှာ) မိမိကို သတ်သေသူများတွင် အိမ်ထောင်သည်များထက် အိမ်ထောင်မပြုရသေးသည့် လူပျို၊ အပျို၏ အရေအတွက်မှာ (အမြဲတမ်း) အများဖက်မှ ရှိနေလေသည်။
ရူးသွပ်သည့် လုပ်ရပ်များကို လုပ်ဆောင်သူများအကြားတွင် လူပျို၊ လူလွတ်၊ အပျိုများ၊ ယခုထိ အိမ်ထောင်မပြုရသေးသည့် ဘ၀ကို တည်ထောင် နေသူများ အများအပြားဖြစ်ကြောင်း မိမိတို့ နိုင်ငံ၏ လူမှုရေး ၀န်းကျင်၌ တွေ့မြင် နိုင်ပါသည်။
မြှောက်များစွာသော ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ တရားခံများမှာ လူပျို၊ အပျို၊ လူလွတ် (သို့မဟုတ်) လူလွတ်ပမာ ဘ၀တည်ဆောက်သူများ ဖြစ်ကြ ပေသည်။
အမှန်တကယ် လက်ထပ်ထိမ်းမြားသည့် ဘ၀သည် မနုဿ၊ ပုထုဇဉ် လူသား၊ မိမိ ကတိကို သာ အလေးပေးခြင်း (တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်း)၊ ဟိုလိုလို၊ ဒီလိုလို၊ ဒွိဟ၊ သံသယရောဂါများမှ ကယ်တင်ပေးလေသည်။ ပြီးနောက် မိမိ၏ သေးငယ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင် (ခ) မိသားစု အတွက်ကြောင့် တာဝန်များကို ခံစားတတ်လာလေသည်။ ပြီးနောက် (မိမိ မိသားစု လေးကို) အမျိုးမျိုး သောအန္တာရာယ်၊ အမှားအယွင်းများမှ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေး လေသည်။ ဤ “တာဝန်ကို မခံစားတတ်၍ မကျေပွန်ခြင်း” နှင့် “လူမှု ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့် အဆက်အသွယ် ပြတ်တောက်နေခြင်း” သည်လည်းပဲမကောင်းမှုဒုစရိုက်၏ အခြားမျက်နှာ တစ်ဖက်ပင်ဖြစ်လေသည်။ ဤကိစ္စ၌ အရေးအကြီးဆုံးမှာ (မနုဿ လူသားအနေဖြင့်) မိမိ၏ အင်အားနှင့် စွမ်းအား အားလုံးကို အသုံးမပြုနိုင်ခြင်းနှင့် ဘ၀အတွက် တိုးတက်၊ ဖွံ့ဖြိုး စေမည့်အင်အား၊ အားလုံးကို တစ်နေရာတည်း မစုစည်း နိုင်ခြင်းဖြစ်ပေသည်။
ဤ လုပ်ရပ်သည် တစ်ဦး တစ်ယောက်တည်း ၏ ဘ၀ကို တည်ဆောက် ဖို့ပင်ဖြစ်ပါစေ၊ ထိုတစ်ယောက်တည်း ဖြစ်သည့် အတွက် မည်သို့ပင် ဖြတ်သန်း ရပါစေ၊ ၀မ်းမနည်းတော့ချေ။ အင်အားများကိုလည်း အများကြီးစုဖို့ မလိုတော့ ဟုယူဆလေသည်။ (ဘ၀ကို မလေးစား၊ ဂရုမပြုတော့ချေ။)
ဤအကြောင်းအရာသည်လူပျို၊ လူလွတ်၊ အိမ်ထောင်ဖက်မရှိသူများ ၏ဘ၀ကို ပျင်းရိ ပျင်းတွဲ ဖြစ်စေလေသည်။ ဂရုမပြုမှု၊ မထီမျက်မြင်ပြုမှုနှင့် အတူ ၄င်း၏ဘ၀အတွက် လိုအပ်သည့်အရာများ၊ ၄င်းကိုယ်တိုင် နားလည် သဘောပေါက်ပြီးသုံးစွဲလာသည့်လိုအပ်ချက်များကို မထိန်းသိမ်းနိုင်တော့ချေ။
ဤအထောက်အထား သက်သေကြောင့် မြောက်များစွာသော လူငယ်၊ လူရွယ်၊ လူပျို၊ လူလွတ်များသည် မိမိလူပျိုဘ၀၌ပင် မိမိဘ၀ကို မရုန်းကန်၊ မလှုပ်ရှားနိုင်သဖြင့် (အမြဲလိုလို) သူတစ်ပါးအား မှီခို၍ ဘ၀ တည်ဆောက်ရရှာလေသည်။
လူပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်း၌ ၄င်းကို လူဖျင်း၊ လူညံ့၊ လူပျော့ အဖြစ် စာရင်းသွင်းကြလေသည်။ သို့သော်လည်းပဲ (၄င်းသည်) အိမ်ထောင်ပြု ပြီးသူအဖြစ် ဘ၀စတင်သည်နှင့် တည်ငြိမ်ဖြောင့်မတ်သည့် အကျင့်စရိုက်ရှိသူ၊ အင်အားစွမ်းအားရှိသူ၊ စိတ်ရှည်သူ၊ တကယ်လုပ်သူ၊ ရည်မှန်းချက်ရှိသူ၊ ကြိုးစားသူဖြင့် ဖြတ်ထိုးဥာဏ်ရှိသူ စာရင်း၌ ၀င်လာလေသည်။
ဤဂုဏ်ပုဒ်များအားလုံးသည် မိမိတာဝန် မိမိသိ၍ ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ရမည်ဆိုသည့် ခံစားမှု အသိစိတ်၏ တန်ခိုး အာနိသင်ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
“ရိုဇီ စားနပ်ရိက္ခာသည် မိမိ၏ ဇနီးကြင်ယာနှင့်အတူ ရှိကြောင်း” အစ္စလာမ် မီဆိုင်ရာ အကိုးအကားကျမ်းများ၌ ပါရှိကြောင်း၊ တိုက်တွန်းထား ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ဤအဓိပ္ပါယ် (အိမ်ထောင်သည်အဖြစ်နေဖို့ဆိုသည့်) ဖက်သို့ ဖော်ညွှန်းထားခြင်းဖြစ်နိုင် ပေသည်။
ဤအတွက်ကြောင့် လူပျို၊ လူလွတ်၊ အိမ်ထောင်မရှိသူများကို (တဲဖျင်များတွင် နေထိုင်သူများ၊ အိမ်မရှိ မြေမရှိ လျှောက်သွားနေထိုင်နေသူ များ(ကလေကချေများ) ဟု ခေါ်ဝေါ်လျှင် မှားမည် မဟုတ်ပေ။
ဤကလေကချေ ပုဂ္ဂိုလ်များသည် မည်သည့်မြေကိုမျှ အတည်တကျ ဖြစ်ပြီး၊ စည်ကားသိုက်ဝန်းအောင် မပြုကြချေ။ အကြောင်းမှာ ၄င်းတို့အနေဖြင့် တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ အလျင်အမြန်ကူးပြောင်းကြသည့် အတွက်ကြောင့် ပင်ဖြစ်ပေသည်။ ၄င်းတို့သည် နမော်နမဲ့၊ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ နိုင်ကြလေသည်။
စာရိတ္တပိုင်းဘာသာရပ်အရ ရှုမြင်သုံးသပ်လျှင် လူပျို၊ လူလွတ်၊ အိမ်ထောင်မရှိသူသည် “ ပြီးပြည့်စုံသည့်လူ ” ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အကြောင်းအရင်းသည်ကား - စာရိတ္တပိုင်း ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာအရ စာရိတ္တ၏ အဓိပ္ပာယ်ဆိုလိုမှုကို ဆောင်ထားသည့် အမြောက်အများသောဂုဏ်ပုဒ်များ (သာဓကအားဖြင့် …) သစ္စာရှိမှု၊ ခွင့်လွှတ်မှု၊ ယောင်္ကျားပီသမှု (ကတိတည်မှု) ချစ်ခင်ယုယမှု၊ မေတ္တာဂရုဏရှိမှု၊ စတေးခံမှု၊ အမှန်တရားကို သိရှိနားလည်မှု တို့အားလုံးသည် မိသားစု၊ ခင်ပွန်းနှင့်ဇနီးဘ၀၊ ကလေးများနှင့် အတူနေထိုင်ရ သည့်ဘ၀ဆိုသည့် ခြုံထည်အတွင်း နေထိုင်မှသာ ဖြစ်နိုင်ပေသည်။ မည်သူမဆို အိမ်ထောင်သည်ဘ၀နှင့် ဝေးနေမည်ဆိုလျှင် (အထက်ဖော်ပြပါ) ဂုဏ်ပုဒ်များ၏ ဆိုလိုချက်အဓိပ္ပာယ်ကို (အသေအချာနည်းလည်နိုင်မည် မဟုတ်ပေ။) အနည်းငယ်သာ နားလည်ပေမည်။
အိမ်ထောင်ပြုခြင်းဆိုသည်မှာလူသားအနေဖြင့် မြောက်များစွာသော တာဝန်၊ ၀တ္တရားများကို ထမ်းဆောင်ဖို့နှင့် အခက်အခဲ၊ အကြပ်အတည်း အမြောက်အများကို ဖိတ်ခေါ်လိုက်သည်နှင့် တူသည်ဆိုသည့် စကားမှာ မှန်ပေသည်။
သို့သော် မနုဿလူသား၊ ပုထုဇဉ်လူသားသည် အခက်အခဲ၊ အကြပ် အတည်း၊ ဒုက္ခများကို ရင်မဆိုင်ဘဲ၊ တာဝန်၊ ၀တ္တရားများကို တာဝန်မယူဘဲ ပြည့်စုံသည့် လူသားတစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်ပါ သလား?
(မနုဿလူသား) ၏ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် ၀ိဥာဉ် (ရုပ်နှင့်နာမ်) ၏သဘာဝ လိုအပ်ချက်များ ဆိုင်ရာကိစ္စအတွက် အဖြေထွက်နိုင်မှု၊ အဖြေမထွက်၊ အဖြေ မပေးသည့် အခြေအနေတွင် ရုပ်နှင့်နာမ်အတွက် မလိုလားအပ်သည့် တုံ့ပြန်မှု များ၊ ဆိုးကျိုးများဖြစ်လာမည်မှာ မလွဲပေ။ ဤအတွက် သီးသန့် အခန်းကဏ္ဍ၊ ဖြစ်ရပ်မှန်ရှိပေသည်။ ဤကဏ္ဍ၊ ဖြစ်ရပ်မှန်အတွက် သီးသန့် တင်ပြဖို့ မလွဲ မသွေလိုအပ်ပေသည်။
ဤအမှန်တရား၊ဖြစ်ရပ်မှန်များ၊ငြင်းမရသည့် အကြောင်းအရာများကို အခြေခံပြီး ပြောလို့ရသည့် အချက်မှာ - အကယ်၍ “လူပျို၊ လူလွတ်၊ အိမ်ထောင်မပြုသူ” နှင့် လက်ထပ်ထိမ်းမြား၊ မင်္ဂလာဆောင်နှင်းခြင်းပွဲများ၊ အစီ အစဉ်များ မြောက်များစွာလျော့ကျ၊ ကျဆင်းလာမည်ဆိုလျှင် လူမှုပတ်ဝန်းကျင် အတွက် ကြီးမားသည့် ကပ်ကြီးတစ်ခုဆိုက်လာပြီဟု အမည်ပေးမည်ဆိုလျှင် ရပေသည်။ ဤအမည်ပေးမှုအတွက် မည်ကဲ့သို့မျှ အတိုင်းထက်အလွန် ပြောဆို သတ်မှတ်မှု မဖြစ်နိုင်တော့ပေ။
သို့သော် အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း မေးစရာမေးခွန်းထွက်လာလေ သည်။ မေးခွန်းကား - ဤကဲ့သို့ ထွက်ပေါက်မရှိသည့်လမ်း၊ အင်အား၊ စွမ်းအားကိုကုန်ခန်းစေသည့်အကြပ်အတည်း၊ဒုက္ခများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသောလူငယ်၊လူရွယ်များ အနေဖြင့် ဤ (သဘာဝက ပေးအပ်လာသည့် တာဝန် (ထိမ်းမြားခြင်း) နှင့်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်၊ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ပေးဆောင်လာသည့် တာဝန် (အိမ်ထောင်ပြုခြင်း))ကို ကျေပွန်ရန် ဘာလုပ်ရမည် ဆိုသည့် အချက် ပင်တည်း?
ဘာလဲ…! ယခုလို တိုးတက်နေသည့် ခေတ်၊ အခက်အခဲ၊ အကြပ် အတည်း၊ ဒုက္ခများ အားလုံး၊ အကြောင်းမဲ့၊ နေရာမဲ့ မျှော်လင့်ချက်များ၊ မိဘများ နှင့် လူငယ်၊ လူရွယ်များ အကြားရှိ ကွဲလွဲမှုများ၊ သဘောထားမတူညီမှု များ၊ လက်ရှိခေတ် ပညာသင်စနစ်နှင့် အချိန်၊ ဓလေ့ထုံးစံ ၇ မျိုး ၇ သွယ် (ဓလေ့၊ ထုံးတမ်းအမျိုးမျိုး)၊ စားဝတ်နေရေး၊ အလုပ်အကိုင်၏ အခက်အခဲများ၊ အဆင်မပြေမှုများ၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အယုံအကြည်ကင်းမဲ့ မှုများ၊ (ကတိ မတည်ကြမှုများ) ရှိနေသည့် အခြေအနေ အရ လူငယ်၊ လူရွယ်များအနေဖြင့် ဤကြီးကျယ်၊ မြင့်မြတ်၊ မင်္ဂလာရှိသည့် တာဝန်ကြီးတစ်ရပ် ဖြစ်သည့် လက်ထပ်၊ ထိမ်းမြားခြင်းကို သူ့အချိန်နှင့်အညီ ထမ်းဆောင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသလား?
ဤကိစ္စ (ပြဿနာ) ကို မလွဲမသွေ၊ အသေးစိတ်ဆွေးနွေး တင်ပြမှု၊ စိစစ်မှုပြုရမည် ဖြစ်ပေသည်။ ဤပြဿနာကို မဖြေရှင်းမချင်း၊ ဤလူနေမှု ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်း၏ ကြီးမားလှသည့် အခက်အခဲ၊ ဒုက္ခပြဿနာ အခြေအမြစ် အစစ်ကို ဖယ်ရှား၊ ဖြေရှင်းနိုင်မည် မဟုတ်ချေ။
သတိပြုပြီး မလွဲမသွေ ဂရုပြုရမည့် အရေးကြီးအချက်တစ်ခု ဤနေရာ ၌ရှိပါသည်။ ထိုအချက်မှာ - လက်ထပ်ထိမ်းမြား မင်္ဂလာနှင့် ၄င်းအတွက် အခက်အခဲ၊ ဒုက္ခများကို ဖြစ်စေသည့် တရားခံများမှာ ကျွန်ုပ်တို့ နှင့် ကျွန်ုပ် တို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်၊ အသိုင်းအ၀ိုင်းဖြစ်ချေသည်။ အမှန်တကယ် အသိုင်းအ၀ိုင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုသည်မှာလည်း ကျွန်ုပ်တို့မှအပ အခြားအရာ မဟုတ်ချေ။ အခြားအဓိပ္ပာယ် ဆိုလိုချက်ကို မဆောင်ထားပေ။
ဤ (လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု၊ အိမ်ထောင်ပြုမှု) အတွက် အခက်အခဲ၊ ဒုက္ခများ၊ အကြပ်အတည်းများသည် သူ့အလိုအလျောက် မိုးကောင်းကင်မှ ကျလာသည်မဟုတ်ပေ။ မြေပထ၀ီအတွင်းမှလည်း ခွဲပြီးထွက်လာသည် မဟုတ်ချေ။ တစ်နည်းဆိုရလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သာ ယူဆောင်လာသူများ၊ ဖန်တီး သူများပင်တည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ မှားယွင်းသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်၊ မှားယွင်းချွတ်ချော်သည့် တွေးခေါ်၊ စဉ်းစားချက်၊ မှားယွင်း၊ မမှန်ကန်သည့် ဓလေ့၊ ထုံးထမ်း စဉ်လာများ၊ ယဉ်ကျေးမှုများ၊ မျက်ကန်းနောက်လိုက်ခြင်းတို့ကို အခြေခံ၍ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ပင်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့် ခိုင်မာပြတ်သားသည့် ရည်မှန်းချက်နှင့် အတူ အစီအစဉ် ဆွဲမည်ဆိုလျှင် ဤအခက်အခဲ၊ အကြပ်အတည်း၊ ပြဿနာ ဒုက္ခများ ကိုအဆုံးသတ်နိုင်မည် ဖြစ်ပေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အစီအစဉ်အသစ်ကို ရေးဆွဲကြရပေမည်။ ထိုအစီ အစဉ်သည်လည်း အဖြစ်မှန်၊ အခြေမှန်၊ အစစ်အမှန်တရားနှင့် စစ်မှန်၊ မှန်ကန်သည့် ဘ၀တည်ဆောက်မှုကို အခြေခံပြီး ရေးဆွဲထားသည့် အစီအစဉ် ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပေသည်။ စိတ်ကူးယဉ်များ၊ (အိမ်မက်) အထင်များ၊ (လုံးချင်း) ၀တ္ထုဆန်ဆန်၊ ဒဏ္ဍာရီ ပုံပြင်သဖွယ်များ၊ အမှားအယွင်းနောက်လိုက်မှု များအပေါ် အခြေ မခံမိ ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။
ဤလုပ်ငန်းအတွက် လှုပ်ရှားမှုအတွက် လမ်းပိတ်နေပြီး၊ ထွက်ပေါက် မရှိတော့ဟူ၍မဟုတ်ပါ။ ဤလုပ်ငန်းအတွက် လုပ်ဆောင်ရန် မိုအ်ဂျေဇာ (ဘုန်းတန်ခိုးပြသခြင်း) လည်း မလိုအပ်ချေ။ မဖြစ်နိုင်သည့် လုပ်ရပ်လည်း မဟုတ်ချေ။